Indlela ukudayisa izimoto? Izindlela ezifanele kakhulu
Wonke umnikazi imoto ngokushesha noma kamuva ukucabanga mayelana Eqinisweni, indlela ukuthengisa imoto. Ngu-proxy noma nge-akhawunti isitifiketi - akunandaba. Into esemqoka ukuthi kwathengwa okuthile ngokushesha futhi ngaphandle kwezinkinga. Futhi ukuze ngokushesha ngangokunokwenzeka ukuthengisa imoto yakho, udinga ukwazi izimiso ezimbalwa eziqondile. Kulesi sihloko, sizokutshela ukuthi singakwazi ukuqeda imoto ngokushesha ngangokunokwenzeka.
Umthengi phakathi kwezihlobo
Okokuqala, wazise wonke umndeni wabo, abangane nezihlobo bavuma. Mhlawumbe omunye wabo uzothola imoto yakho. Inzuzo enkulu yale indlela yentengiso - ke ithemba. Uqinisekile ukuthi ngeke bakhathazeke ukwenzé ngokwethembeka umthengi futhi niyokwazi ukuthi "umngane yensimbi" yakho kusezandleni emihle.
Indlela ukudayisa izimoto ngokusebenzisa isikhangiso?
Njengoba wazi, ukukhangisa - kuyinto injini yokuthengelana. Unganqikazi izikhangiso emaphephandabeni naku-Inthanethi. Into esemqoka lapha - ukuba amphuzise umbhalo ukukhetha isithombe esingcono kunazo of "umngane yensimbi 'bakhe futhi ukumemezela inzuzo yangempela imoto. Qiniseka - ezinsukwini ezimbalwa uzothola umthengi. Khumbula, uma ucabanga mayelana nendlela ukuthengisa imoto: isivumelwano sokuthenga / ukudayiswa esingenhla kufanele lukhombise kuphela idatha ngqo mayelana imoto. Kungenjalo-ke kuyoba ezingavumelekile.
Indlela ukudayisa izimoto nge "ukuhweba-e"?
Muva nje, bemthanda baseRussia ukujabulele indlela efana "ukuhweba-e". Le ndlela kusho ukuthengiselana akuyona ngisho ukudayiswa, kanye exchange okulingana izimoto elisha ngelinye icala olwengeziwe. Okusho ukuthi, ngokungafani nezindlela zangaphambilini, ungachithi isikhathi ekufuneni umthengi kanye nokubhaliswa yonke imibhalo edingekayo. Eqinisweni, ngemva kwamahora ambalwa uzoba umnikazi agcwele imoto entsha ngokuphelele. Nokho, kuwufanele ukukhumbula ukuthi ngokuthengisa imoto ngokuvumelana "ukuhweba-e", ulahlekelwa amaphesenti angu-yenani emakethe "umngane yensimbi 'bakhe 20. Kodwa kungcono kakhulu kunanoma yokusesha eside ofanelekayo umthengi, injabulo kanye impikiswano esikhathini SAI ku kokwesula ukubhalisa.
Indlela ukudayisa izimoto emakethe auto?
Futhi indlela ezithakazelisayo, kodwa kunalokho kukhathaza. It ingasetshenziswa kuphela uma ungakwazi ukuthengisa imoto lonke izindlela ngenhla. Nazi ezinye umehluko wemisindo nemiqondo yamagama. Ngokwesibonelo, uma unquma ukuya emakethe yemoto ngesonto, akekho uzokunika isiqinisekiso azidayisayo zisheshe zithengwe. Ngakho-ke kungcono ufune abathengi for okukhiphayo. Izinzuzo le ndlela: kungenzeka ukuxhumana ngqo umthengi. Nebubi: ugwadule olukhulu isikhathi yokungena zikhokhelwe yokupaka. Futhi emakethe kumele ume usuku lonke, ngakho kusengaphambili ukujwayela ukuphila emotweni.
Ngakho, umbuzo ukuthi bathengisa izimoto, sathola izimpendulo ambalwa. Kususelwa osekushiwo, siphawula ukuthi ofanele kakhulu izindlela ezintathu zokuqala.
Enye into: uma uthengisa imoto ngezikhangiso, qiniseka ukwenza pre-ukudayiswa ukulungiselela, geza nasePoland imoto. On a "ukugwinya" luma abathengi kakhulu enjalo.
Lwakamumva okuyisisekelo "Lada Vesta": izithombe kanye Ukucaciswa
Suzuki Grand Vitara 2013 - kusese Suv kanye futhi ngentengo nesizotha
Renault Sandero - version Stepway we Izibuyekezo ngakho kanye nokubuyekeza
2115 - Tuning ingaphakathi, hhayi kuphela
12 izinzuzo ezimangalisayo yetiye sembabazane, kufanele uqaphele
Yokuthengisa Direct: iyini imfihlo?
Ama-absorbers adonsa - yini emotweni? Isimiso sokusebenza kanye nezici zokumangalisa
Latvia, Riga amathuba nokungcebeleka
"Paxil" ejenti antidepressant. Yokusetshenziswa zomuthi
Izici Jikelele amadoda eLvov
Ukushelela kaFreud: ithuba noma njalo
Umdwebo omuhle wephethini wamantombazane: nge-skirt-bell, ilanga nesikhwama
Carp eyayigcwele ngesiHebheru: iresiphi Zhytomyr nge step by step izinkomba
Kungani ngezinye izikhathi sibe nomuzwa wokuthi izimpukane isikhathi?